Ebee ka ilele egwuregwu ahụ n'oge oge 2021-2022? | Akụkọ Ngwa
Ebee ka ekiri egwuregwu a n'oge a?
Septemba pụtara na ịlaghachi na nkịtị, ọbụlagodi n'ọtụtụ egwuregwu. Asọmpi egwuregwu na -amalitekarị oge dabara ha ma ọ bụ gaa n'ihu na ya. Yabụ na ị gaghị efu ihe ọ bụla, site na Ozi gadget anyị ga -agwa gị ebe ị ga -ahụ asọmpi egwuregwu isi na oge 2021/22.
Dị ka ọ na -adị, ị na -amalite ikiri bọọlụ n'ime izu abụọ gara aga nke Ọgọst. Enwere naanị otu ihe mere ka ụbọchị ahụ na -aga na kalenda ya na COVID bụ afọ gara aga. Oge a ka nwere ọrịa na -efe efe mana ọ ka pere mpe. Mgbanwe dị mma ga -enye ohere ịlaghachi ọha na ama egwuregwu, n'agbanyeghị na ee, maka ugbu a, nwere oke ikike.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na -agaghị azụta tiketi, ị ga -enwe obi ike maka na ị ga -aga n'ihu na -enwe nhọrọ nke ilele LaLiga na telivishọn yana ọnụego ndị a niile ha na -agwa anyị. Na -agagharị. Nke afọ a na -eme ugboro ugboro nke afọ gara aga. Movistar na Orange bụ naanị ndị ọrụ ị nwere ike lelee bọọlụ site na ngwugwu ha jikọtara ọnụ, ọnụego Fusion na Love, n'otu n'otu.
N'ihe banyere basketballỌ ga -adabere n'ọkwa asọmpi ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ a asọmpi Europe dị ka Euroleague, Njikọ Njikọ Bọọlụ Nkata ma ọ bụ Eurocup, ị nwere ike ịhụ site na DAZN; mgbe Njikọ Endesa, na Movistar, onye bụ onye nwere ikike mgbasa ozi nke asọmpi a.
Kedu maka egwuregwu ndị ọzọ?
N'ime ụgbọ ala, asọmpi eze nwanyị bụ Formula 1 na MotoGP. Agbanyeghị na asọmpi ndị a ka nwere ọnwa ole na ole ị ga -aga, ị ka nwere ike irite uru nke ikpeazụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị na -agba ya nke ọma, ị nwere ike hụ ọkara nke fọdụrụ n'oge a n'efu. Ihe kpatara ya bụ na DAZN nwetara ikike mgbasa ozi ruo n'afọ 2022 ma nwee oge nnwale n'efu otu ọnwa. Na, dabere na ihe masịrị gị, ị nwere ike ịdenye aha n'elu ikpo okwu kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ.
Ọzọkwa, Movistar nwere nkwekọrịta na DAZN, yabụ ị nwekwara ike ịhụ ọdịnaya nke injin site na onye na -acha anụnụ anụnụ. Agụnyere ya na ngwugwu TV TV, nke agụnyere na ọnụ ahịa na ọnụego Fusion abụọ (Fusion Plus na Fusion Total Plus 4). N'ime ọnụego Fusion ndị ọzọ, ị ga -akwụ ọnụ ahịa ngwugwu ahụ elu.
Ịgba ịnyịnya ka na -aga n'ihu ugbu a na European Championship n'obodo Trento nke Italy. Yabụ ọ bụrụ na ị hụrụ egwuregwu a n'anya, ị nwere ike ilele agbụrụ ịgba ọsọ niile site na DAZN. Ikpokoro nwere ọwa Eurosport abụọ (Eurosport 1 na Eurosport 2), nke nwere ikike mgbasa ozi maka ịgba ígwè niile. N'ezie, ihe Ọwa Eurosport 1 dịkwa n'ime ụlọ ọrụ dịka Orange, Vodafone ma ọ bụ Virgin Telco.
Enwekwara omume nke hụ ndị na -arụ ọrụ dị ka Yoigo, Movistar, Guuk ma ọ bụ MásMóvil. N'okwu a, yana DAZN, nke agụnyere na ụfọdụ ọnụego ya ozugbo na ọnụahịa yana na ndị ọzọ, a ga -akwụrịrị ụgwọ dị elu.
Na tenis ọ bụ otu ihe ahụ na ịgba ịnyịnya. N'ezie, dabere na asọmpi ị ga -enwe ya n'otu ebe ma ọ bụ ọzọ. A hụrụ atọ n'ime Grand Slam anọ (Roland Garros, US Open na Australian Open) na Eurosport 1, dị na ndị ọrụ dịka Yoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone ma ọ bụ Virgin Telco yana DAZN. N'aka nke ya, Wimbledon na Movistar, nke bụ onye zụtara ikike ịhụ ihe onyonyo. N'ime asọmpi asọmpi dị ala dịka Master 1000, 500 na 250, a na -ahụ ụmụ nwoke na Movistar na ụmụ nwanyị na DAZN.
Egwuregwu enwere ọtụtụ na ụzọ iji hụ ha kwa. Ugbu a, ị ga -ahọrọ egwuregwu kacha masị gị ma nwee ọ enjoyụ n'oge ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ebee ka ekiri egwuregwu a n'oge a?
IPhone 13 na ihe niile Apple gosipụtara na isi okwu ya
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbata HBO Max na Spain